आईपीएल खेलेर फर्किए लगत्तै दिल्लीले गर्यो सन्दीप लामिछानेको दिल खोलेर यस्तो प्रसंशा !
जेठ १०, २०७५ BNNTV
एजेन्सी । वीवो आईपीएल २०१८ लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, दिल्ली डेयरडेविल्सको लागि भने प्लेअफभन्दा पहिले नै आइपिएलबाट बाहिरिन पुग्यो। दिल्लीको सुरुवात निकै खराव रहे पनि उसको अन्तिम खेलहरु भने शानदार रहे। किनकी दिल्लीले आफ्ना अन्तिम दुई खेल भने चेन्नई सुपर किंग्सलाई र मुम्बई इन्डियनसलाई पराजित गर्न सफल भएको थियो।
दिल्लीले यस सिजनमा मुम्बई इन्डियनसलाई ३ पटक र चेन्नई सुपर किंग्सलाई २ पटक हराएको थियो। यी दुई टोली बाहेक अन्य कुनै पनि टिमलाई दिल्लीले जित्न सकेन। यस सिजनमा दिल्लीले आफ्ना १४ खेल मध्ये ५ खेलमा मात्र जीत हात पार्न सफल भयो।
यस सिजनमा दिल्लीले प्लेअफमा स्थान बनाउन नसके पनि उसले यस्ता ३ जना युवा खेलाडी पायो जसले अनुभवको केहि कमी भए पनि आफ्नो प्रदर्शनले सबैलाई ध्यान आफूतिर तान्न सफल रहे। यस सिजनमा दिल्लीको लागि ऋषभ पन्त सबै भन्दा बढी ६८४ रन बनाए। त्यसैगरी बलिङतर्फ ट्रेन्ट बोल्ट १८ विकेट लिन सफल भए।
दिल्लीले गरेको यस सिजनका ३ खोज
१. सन्दीप लामिछाने
दिल्लीका यस सिजनमा केहि नयाँ खेलाडीहरुले निकै राम्रो र स्मरणीय प्रदर्शन गरे। यस्तै खेलाडीको सूचिमा सबैभन्दा पहिले नाम आउंछ, नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको। सन्दीपले जति वटा खेल खेले ति खेलमा उनले दिलोज्यान लगायारै खेले। उनले अन्तिमका तीन म्याच खेल्दै उनले १६.४४ को औसतले ५ विकेट लिए। ६.८३ को इकोनामीले रङ खेर्जिए जुन टी-२० मा निकै राम्रो औसत मानिन्छ।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा मुम्बई इन्डियनसका विरुद्ध सन्दीपले अमित मिश्रासँगै मिलेर समान ३ विकेट लिँदै दिल्लीको जितको लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
२. पृथ्वी शह
अर्का स्मरणीय खेल प्रदर्शन गर्ने दिल्लीका युवा खेलाडी हुन् पृथ्वी शह। जुन बेला दिल्लीका दुवै ओपनर विदेशी खेलाडीहरु नचलीरहेको बेला आएर पृथ्वीले राम्रो खेल खेलेका थिए।
भारतललाई अन्डर – १९ वर्ल्ड कप जिताउने कप्तान पृथ्वीले आफुले खेलेको पहिलो खेलमा नै १० बलमा २२ रन प्रहार गरेका थिए। त्यसपछी लगातार टिममा परेका उनले कोलकताका विरुद्ध सानदार ६२ रन प्रहार गरेका थिए। उनले आफुले खेलेका ९ खेलमा १५३ को स्ट्राईक रन रेटका साथ २४५ रन बनाए।
यो सूचिको तस्रो स्थानमा रहेका छन् अभिषेक, जसले आफ्नो पहिलो आइपीए खेलमै सबको ध्यान आफूतिर तान्न सफल भए। शर्माले रोयल च्यालेंजर्स बैंग्लोरविरुद्ध १९ बलमा ४६ रन प्रहार गरेका थिए।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ १०, २०७५१७:२९
विश्वकप फुटबल २०१८ को अफिसियल गीत सार्वजनिक: यस्तो छ गीत [ भिडियो ]
ए डिभिजन लिग : थ्रीस्टारले फ्रेन्ड्सलाई हरायो
ब्राजिलले अर्जेन्टिनालाई हरायो
यी हुन् मेसीको हालसम्मकै ४ उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन (भिडियो सहित)
लज्जास्पद हारपछी अर्जेन्टिनी फ्यानहरु बने क्रुद्ध: मेस्सीलाई स्टेडियमबाटै यसरी थुके…
दीपेन्द्रको शानदार ब्याटिङ, बने म्यान अफ द म्याच
अफ्रिदी र जमान चल्दा न्युजिल्यान्डमाथि पाकिस्तानको सहज जित